China Kurodha uye kuburitsa robhoti yeCNC lathe muchina Mugadziri uye Mutengesi |Yunhua
HY1020A-168 yakagadzirirwa CNC kurodha uye kurodha application, Nekuda kweiyo 20kg payload, uye 1680mm ruoko kusvika, Inogona kushandiswa mune akawanda mamiriro.
-Kushanda kwakanaka: inogona kushandiswa kubata, palletizing, kurodha uye kurodha
-Kureba kukuru: 1680mm
-Yakakodzera mutoro: 20kg
-Mutengo wakanaka uye unhu
HY1020A-168 irobhoti 6 axis inonyanya kuiswa mukurodha nekuburitsa.Iro mechanical arm inodzorwa nenhamba yekudzora system.Nerubatsiro rwemunhu-kombuta yekudyidzana interface, iyo inodzora dhiraivha yeinjini yega yega uye kona yayo uye kutumira murairo kumuchina wepasi, HY1020A-168 robhoti inopedzisa akatevedzana zviito zve otomatiki kurodha nekuburitsa.Inogona kutsiva manyorero ekurodha uye kuburitsa mashandiro uye kuumba inoshanda otomatiki kurodha uye kurodha sisitimu.
Serobhoti inoshanda zvakanyanya otomatiki, HY1020A-168 ine hunhu hwekugadzikana, hwakavimbika uye hunoramba huchiitwa, hwakanyanya kurongeka, kubata nekukurumidza uye kusungirira, kupfupisa tempo yekushanda.Inogona kuvandudza chigadzirwa chega chega chekugadzira, kumhanyisa kugadzirwa kwakawanda uye nekukurumidza uye kuchinjika kujairana nemabasa matsva uye zvigadzirwa zvitsva, kupfupisa kuburitsa.
Axis MAWL Positional repeatability Powercapacity Nzvimbo yekushanda Sheer uremu Installment IP giredhi
6 20KG ±0.08mm 8.0KVA 0-45℃20-80%RH(hapana chando) 330KG Pasi, kusimudza IP54/IP65(chiuno)
Chikamu chekuita ±170° +80°~-150° +95°~-72° ±170° ±120° ±360°
Maxi speed 150°/s 140°/s 140°/s 173°/s 172°/s 332°/s
CNC Muchina Kurodha uye Kuburitsa Chikumbiro
20kg robhoti yeCNC Lathe Machine
Kurodha nekuburitsa App yemuchina weCNC
Q1.irobhoti iyi inoshandiswa nei?
A.Robotic Loading and unloading inogadzirirwa maturusi emuchina.Mutsara wekugadzira kurodha uye kurodha workpiece flip, shandura odha yebasa nezvimwe zvakadaro.
Q2.Zvakadini nekutakura uye kuburitsa robhoti kunyatsoshanda?
A.Kushandisa kurodha uye kuburitsa robhoti kunogona kuwedzera kugadzirwa, robhoti rinowedzera kugadzirwa kwemuchina kusvika 20% pamusoro pemaitiro echinyakare.
Q3.Can kurodha uye kuburitsa robhoti kurongedza nekuona sensor?
A.Chiratidzo chinogona kushandiswa kutsvaga zvikamu pabhandi rekutakura kana pamubhedha.Izvi zvinobva pane iwe unoziva YOO HEART robhoti zvakanyanya kunaka.
Q4.Mangani emubhadharo waunayo wekutakura uye kuburitsa robhoti?
A.Kuisa uye kuburitsa robhoti, tora uye isa robhoti zvakare, YOO HEART robot kubva ku3Kg kusvika ku165kg inogona kushandiswa pabasa iri.10kg uye 20kg inowanzoshandiswa.
Q5.Sei ndichifanira kushandisa kurodha uye kuburitsa robhoti kumichina yangu yeCNC?
A.Iyi maindasitiri otomatiki marobhoti anogona kuvandudza kugadzirwa kwakanaka.Robhoti yekudyisa muchina kuchawedzera kubereka uye vashandi vemahara vane hunyanzvi hwekuwedzera basa rinokurudzira uye rine zvibereko.
Zvakapfuura: Robhoti rokupenda
Zvinotevera: Maviri Axis Rotator